Ny tranofiara 'Mamatonalina' an'i Netflix dia namoaka horohoro tao amin'ny tanàna amoron-tsiraka - iHorror
Home Vaovao Mahafaly Fialam-boly Namoaka horohoro tao amin'ny tanàna amoron-tsiraka ny tranofiara 'Mamatonalina' an'i Netflix
by Trey Hilburn III Septambra 8, 2021
by Trey Hilburn III Septambra 8, 2021 20,897 hevitra
Ny tranofiara ho an'ny Mike Flanagan manaraka Netflix tolotra manaraka The Haunting of Hill House ary Tmanenjika an'i Bly Manor izy dia eto ihany amin'ny farany! Lamesa misasakalina toa doozy koa. Azo antoka fa misy an'i Stephen King Zavatra ilaina Vibe hafafy amin'ny toerana manerana ny tranofiara. Tena mpankafy horonantsary mifantoka afovoan'ny tanàna amorontsiraka aho, zavatra maro izay mety ho diso no tapaka tsy ho sivilizasiôna. Tsy namela anay ilay tranofiara, nanome zava-miafina sy hena ampy fotsiny izahay hahatonga anay tsy hila hanina bebe kokoa. Soa ihany fa tsy mila miandry ela isika. Lamesa misasakalina tonga any Netflix amin'ity volana ity.
Ny synopsis ho an'ny Lamesa misasakalina mandeha toy izao:
Ny tantaran'ny vondrom-piarahamonina nosy kely iray mitoka-monina izay ny fisaratsarahana misy dia nohamafisina tamin'ny fiverenan'ny tovolahy iray nanala baraka (Zach Gilford) sy ny fahatongavan'ilay pretra manintona (Hamish Linklater). Rehefa nifanindry tamina fisehoan-javatra tsy fantatra sy toa fahagagana ny fisehoan'i Mompera Paul tany amin'ny nosy Crockett, dia nisy fientanam-pinoana vaovao nanaitra ny fiarahamonina - nefa ve misy vokany lafo ireo fahagagana ireo?
Lamesa misasakalina kintana Kate Siegel, Henry Thomas, Annabeth Gish, Robert Longstreet, Alex Essoe, Michael Trucco, Samantha Sloyan, Rahul Abburi, Crystal Balint, Matt Biedel, Rahul Kohli, Kristin Lehman, Igby Rigney, ary Annarah Cymone.
Faly ve ianao mahita Lamesa misasakalina? Ampahafantaro anay ao amin'ny fizarana fanehoan-kevitra.
Lamesa misasakalina dia manomboka amin'ny Netflix manomboka amin'ny 24 septambra.